Akụkọ - Zere mmega ahụ 4 "Ahụike na -adịghị mma"
Zere mmega ahụ 4 "Ahụike na -adịghị mma"
Ikekwe maka ibi ndụ dị mma, ma ọ bụ iji mee ka ahịrị ahụ sie ike, ọtụtụ mmadụ hụrụ ahụike n'anya, n'ihi nke a, ụfọdụ ụmụ akwụkwọ bidoro na APP omenala ọ bụla, akwụkwọ nkuzi a adaghị, kpọọ nkà nka zuru oke, mana ị ga -ekwu, omume bụ naanị ihe nlele maka ịnwale eziokwu, esola omume “nna ukwu”, omume ụfọdụ na -emehie, nwere ike nwekwuo omume karịa mmerụ ahụ, ndepụta ndị a na -akpọkarị Mmegharị ahụike 4 na -edozi ụzọ ọzụzụ, ndị otu mgbatị ahụ na -edetu ngwa ngwa.
Ụmụ akwụkwọ mgbatị ahụ nwere ike ha emeghị ihe mgbali elu, nkwalite maka akụkụ mmega ahụ: ike elu ahụ, obi, ogwe aka, isi.
Usoro ọzụzụ ịkwalite ọkọlọtọ: nke mbụ, afọ na-esiwanye ike, a na-ejikọkwa agbụ, ibuli igbe iji mee ka eriri ubu kwụsie ike, ahụ n'akụkụ abụọ nke aka ya sara mbara karịa ka ọ na-adị n'ubu, ogwe aka ya ga-adị ogologo na ala. Rịba ama na mgbe ị ga -ebili, ogwe aka gị ekwesịghị ịgbatị agbatị, gbadaa ntakịrị, na mgbe ị dara n'ala 2 ruo 3 sentimita, ahụ gị kwesịrị kwụsiri ike ma dịkwa nwayọ, ma ghara inwe ndidi.
2. Nọdụ ala
Ebe a na-eme mgbatị ahụ bụ: afọ.
Sistemụ ịnọdụ ọdụ ọkọlọtọ: jiri afọ, emela olu n'ukwu, ọnọdụ azụ ala kwesịrị ịrapara n'ahụ na ahụ elu, nke mere na afọ, wee daa nwayọ, ruo mgbe agụba udara dara n'ala, mee ka afọ na -ejigide ala, ọ dịkwa mkpa ilekwasị anya na ntuziaka aka, anya na iku ume, na -eku ume ebe.
3. Ogwe osisi
Akụkụ mmega ahụ na -akwado atụmatụ: ahụ niile, nnwale nnwale nke ịta ahụhụ.
Ezi usoro mmega ahụ nke nkwado plank: buru ụzọ mechie afọ na ukwu, wee bulie thoracic vertebra elu, ma mee ka ubu kwụsie ike. Mgbe anyị na -eme ya, ọ dị anyị mkpa ị paya ntị na isi, isi na azụ ka anyị nwee ike kwụ n'ahịrị, n'olu dị elu na ọbụnadị iku ume.
4. Mmegharị akụkụ nke dumbbells
Ebe mgbatị mgbatị mgbatị kwụ ọtọ bụ: ubu.
Ezi usoro mmega ahụ nke mbuli elu akụkụ dumbbell: mgbe ị buliri dumbbell, mee ka ihu aka gị dị ala mgbe ị na -ebuli, aka enweghị ike ịdị elu karịa ikpere, ikpere enweghị ike ịdị elu karịa ubu, ubu na -alaghachi azụ, ogwe aka nwere ike gbadaa ntakịrị, mgbe ị na -ebuli ume iku ume, mgbe ọ na -ada nwayọ nwayọ, jigide ọsọ ọsọ, agaghị enwe mgbakasị ahụ.
A: obi 1. Press press: tumadi na -eme ọkpụrụkpụ pectoralis isi akwara na uzo obi. Ihe omume: dumbbells n'aka gị abụọ dinaa na bench gị, dumbbells dị n'ubu gị, ọbụ aka na -eche ihu, na -akwagharị ...